Imibhede emi-2 emikhulu, yangasese, yesikhathi eside, eduze nesikhumulo sezindiza, i-BWU - I-Airbnb
Imibhede emi-2 emikhulu, yangasese, yesikhathi eside, eduze nesikhumulo sezindiza, i-BWU
Sinegumbi le-attic eliqediwe eliyimfihlo kakhulu futhi elilungele ukuqashwa isikhathi eside. Lolu hlu luhambisana nolunye ukufakwa kuhlu ngaphansi kwesihloko esifanayo samaqembu amakhulu afuna amagumbi okulala angu-2. Inesiqandisi, i-microwave, umbhede wabantu ababili, umbhede owodwa kanye nebhavu langasese/i-walk in closet. Ibhavu langasese linobhavu we-Jacuzzi whirlpool, kodwa hhayi ishawa. Kukhona indawo yedeski encane elungele ikhompuyutha yakho futhi ingasetshenziswa njengendawo yokusebenza. Kukhona nesofa, i-dresser kanye nesifuba samadrowa.
Leli yigumbi elingaphansi kophahla ngakho kunezinyathelo zokukhuphuka. Ngaphandle kwemibhede, kunendawo yokugqoka kanye nesifuba samakhabethe Kuyindawo enkulu impela enendawo enkulu yokugcina impahla.
Ngiyathanda ukuthi indawo yakithi iyahambeka, iphephile futhi ithule. Futhi sikude nezinyathelo ezisuka kumaMetroparks ethu, lapho ongakwazi khona ukuhamba ngezinyawo, ibhayisikili nokubhukuda. Isikhungo sokuqeqesha i-Cleveland Browns siphakathi nebanga lokuhamba kini nonke balandeli bebhola le-NFL.
UDennis noSusan bangabantu abanobungane, abafinyeleleka kalula abafuna ukuhlangana nawe, futhi bazokubingelela. Sizokusiza nganoma imiphi imibuzo noma ukukhathazeka. Sishayele noma usithumelele umyalezo nganoma yisiphi isikhathi, ngaphambi kokuhlala kwakho noma ngesikhathi sokuhlala kwakho. Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho.
UDennis noSusan bangabantu abanobungane, abafinyeleleka kalula abafuna ukuhlangana nawe, futhi bazokubingelela. Sizokusiza nganoma imiphi imibuzo noma ukukhathazeka. Sishayele noma…